Pakupedzisira Apple Bhadhara Mexico ichauya kusvika 2021 | IPhone nhau
Pakupedzisira Apple Pay inosvika kuMexico muna2021
Apple Bhadhara ndiyo iyo kubhadhara basa yeiyo Big Apple iyo yakaona mwenje kekutanga muna 2014. Makore matanhatu gare gare, kune nyika zhinji umo basa racho risingawanikwe. Nekudaro, kuburitswa kwacho kunoitika zvishoma nezvishoma uye kutaurirana pakati peApple nemabhangi makuru akasiyana munyika yega yega anoramba achiyerera kuti awane kuwanda kwakanyanya kwebasa rinogoneka. Mavhiki mashoma apfuura paive nekufungidzira kusvika kweApple Kubhadhara kuMexico pakupera kwaZvita nekuda kwekugadzirwa kweiyo webhusaiti yepamutemo yeApple Pay pawebhusaiti yayo. Kunyange zvakadaro, Apple yakagadziridza webhusaiti yayo kuMexico ichiona kuti Apple Pay ichave "Inowanikwa muna 2021."
Mexico ichagamuchira iyo Apple Kubhadhara sevhisi muna 2021
Apple Pay iri nyore kwazvo kushandisa uye inoshanda nemaApple zvishandiso zvaunogara uchitakura newe. Iwe unogona kutenga zvakachengeteka uye zvisingaenderane nekutenga muzvitoro, maapplication nemawebhusaiti. Apple Pay iri nyore pane kushandisa kadhi. Uye zvakare yakachengeteka.
Iyo Apple Kubhadhara sevhisi inoshandiswa neanopfuura mamirioni mazana mashanu ePhones pasi rese. Kuwedzera kadhi kuzvigadzirwa zvako kuri kuve nyore. Uye zvakare, kuwedzera kweshumiro munyika yega yega kunoitika zvishoma nezvishoma, kugona kuwedzera mabhanga matsva anoita kuti masisitimu avo aenderane kuti vakwanise kutevedzera kubhadharwa kuburikidza neApple zvishandiso, kunyangwe kana sevhisi yatove yakatomisikidzwa munyika. Iyo inogara ichifambira mberi chikuva chevashandisi.
Apple inoramba ichiedza kunatsiridza yekubhadhara system kuburikidza neQR kodhi dzeApple Pay
Zvisinei, apo Spain yakave neApple Pay kwemakore akati wandei, kune dzimwe nyika senge Mexico idzo dzisati dzanakidzwa nebasa mundima yadzo. Mavhiki mashoma apfuura, webhusaiti webhusaiti yakawedzerwa kune webhusaiti yepamutemo yeMexico. Vazhinji vezvenhau vakadzokorora nhau uye vakafanotaura kusvika kwepuratifomu pakupera kwegore. Kushamisika kunouya apo Apple yakagadzirisa webhusaiti yayo yeMexico kuve nechokwadi chekuti kufamba kwako hakusi kududzirwa zvisizvo:
Inowanikwa muna 2021.
Kunyangwe pasina ruzivo rwakawanda pane webhusaiti yepamutemo, tinoziva kuti vashandisi muMexico vachakwanisa kushandisa Apple Pay nemadhivhiza avo eVISA, Mastercard uye American Express. Izvo zviri pachena ndezvekuti Apple iri kubata hurukuro nemabhangi akakosha kwazvo munyika yeLatin America kuti ive iyo yechipiri nyika yeLatin America kuti igamuchire Apple Pay iine huwandu hwakanyanya hunogona kuvimbiswa uye zvinoenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Pay » Pakupedzisira Apple Pay inosvika kuMexico muna2021
Iye zvino yave kuwanikwa muApple Arcade mutambo mutsva kubva kune vanogadzira Monument Valley
Cydia, isiri yeApple app chitoro, inomhan'arira Apple kuti ive yega